Indlunkulu ithotshwe ngesikhumba sengwe - Ilanga News
Home Izindaba Indlunkulu ithotshwe ngesikhumba sengwe
Indlunkulu ithotshwe ngesikhumba sengwe
lnkosi isicele kumaphisi ukuze sinikelelwe endlunkulu
UBUKHOSI bakwaMkhwanazi, KwaMpukunyoni, eMtubatuba bugcine busiha-mbisile isikhumba sengwe esisha eNdlunkulu kaZulu ukuyithoba amanxeba ngokwenziwe yiphisi lalesi sizwe, elabulala ingwe ladayisa isikhumba. Kusuka kwesokunxele yibambabukhosi lesizwe sakwaMkhwanazi, uSolomon Mkhwanazi, uMnu Sikho Mkhwanazi, yiNkosi Mangosuthu Buthelezi, yiSilo Misuzulu noMnu Johan Mkhwanazi.
KALILIBONI icala ngokudayisa isikhumba sengwe elayibulala kade lizingela iphisi laseNsolweni, eMtubatuba njengoba kugcine sekuphoqeleka ukuba ubukhosi bakule ndawo, bugcine buthole esinye bayoshweleza ngaso eSi-lweni Misuzulu kaBhekuzulu.
UMnu Sabelo “Miyane” Mthembu (25) ogqame ezinku-ndleni zokuxhumana ngokuthi wagwaza ingwe ngomkhonto wa-yibulala, uthi namanje akakuboni okuphambene nomthetho akwe-nza ngokudayisa lesi sikhumba ngo-R20 000.
“Le ndaba ngicela siyiyeke ngoba ngingagcina sengingena enkingeni. Angikuboni kodwa okuphambene nomthetho,” esho.
Ubukhosi bakwaMkhwanazi, KwaMpukunyoni, eMtubatuba – obuholwa yiBambabukhosi uSolomon Mkhwanazi – bugcine buyi-thobile indlunkulu amanxeba ngokuthola isikhumba esisha, basiha-mbisa eNdlunkulu kaZulu ngo-Lwesine olwedlule.
Ngokuthola kweLANGA ngelu-ngu lomndeni wasebukhosini ba-kwaMkhwanazi, uMnu Sikho “Mantashe” Mkhwanazi, ubukhosi buhlulekile wukuthola isikhumba sengwe eyahlinzwa nguMnu Mthembu. Ngeledlule bancinzwa indlebe ngabathile ukuthi kukhona amanye amaphisi ahlinza ingwe eDubelenkunzi, banikela khona nempela babafica abafana bephezu kwayo.
“Inkosi yacela ukuba bayinike isikhumba ngoba sidingwa ngaba-dala basendlunkulu, bayinika.
“Kuthe ngoLwesine olwedlule banikela khona endlunkulu sebesihambisile,” kusho uMnu Mkhwanazi. Uthi le ngwe amaphisi athe izithele kuwona ezingela, ayixosha ngezinja aze ayibamba.
Uthi basola ukuthi ngenye yalezi ezeqa esiqiwini, zigcine seziwuvanzi zidla nemfuyo yabantu.
“Le nto yokuzingela kule ndawo yethu iwumdlalo, maningi amaphisi ayenzayo futhi ahlukene ngamaqembu. Akulula ukuthi ngi-ngadalula iqembu lamaphisi okuyilo elithole le ngwe. Bahamba baze baphumele naseGoli beyo-kwenza wona lo mdlalo wokuzi-ngela.
“Mincane kabi imizi kule ndawo yethu engenazo lezi zinja zokuzi-ngela ezingamabhansi,” kusho yena.
Ibambabukhosi livumile ukuthi bagcine beyile endlunkulu, kodwa langafuna ukudalula okuningi. UMnu Thami Zulu waseNdlunkulu kaZulu,
ukuqinisekisile ukuthi lesi sikhumba sifikile nabaKhwanazi.
“Bafike lapho basishiya eSilwe-ni Misuzulu kaZwelithini noma ngingasalikhumbuli usuku abafika ngalo,” kusho uMnu Zulu.
ILANGA lithole ukuthi amaphisi kawatholanga lutho ngalesi sikhumba.
Previous articleBathole ithuba elingandele bani
Next article‘Sebeyizinkinsela’ abahweba ngokudla ‘kubavukuzi’ betshe